विवाहित महिलाले भूलेर पनि नलगाउनुहोस् यी चीज, मानिन्छ निकै अशुभ – Sandesh Press
विवाहित महिलाले भूलेर पनि नलगाउनुहोस् यी चीज, मानिन्छ निकै अशुभ
June 17, 2021 492
काठमाडौँ । भनिन्छ कि घरकी छोरी र बुहारी लक्ष्मीको रूप हो। यो बिल्कुल सही छ। घरमा छोरीको उपस्थितिलाई लक्ष्मीको प्रवेश मानिन्छ।
यी छोरीहरूले छोरालाई भन्दा बढी खुशी र समृद्धि प्रदान गर्दछन्। जहाँ एकातिर घरकी छोरी बिहे पछि गइहाल्छन्, अर्कोतर्फ अर्काकी छोरी बुहारीको रूपमा हाम्रो घरमा प्रवेश गर्छिन्। यस प्रकारले लक्ष्मीको वास हाम्रो घरमा सँधै रहन्छ।
यसैबीच, हामी तपाईंलाई बताउँछौं, यसका साथले वास्तु दोष वा वास्तुशास्त्रमा मानिसहरूले विश्वास गर्छन् र महिलाहरूका बारेमा धेरै कुरा लेखिएका छन् जुन उनीहरूले गर्नु हुँदैन।
त्यसोभए आज हामी तपाईंलाई ती कुरा बताउँछौ जुन विवाहित महिलालेयस्ता लुगा लगाउनुले उनलाई हानि पुर्‍याउन सक्छ र पतिलाई पनि असर पार्दछ। आउनुहोस् ती चीजहरूको बारेमा थाहा पाउनुहोस्।
भनिन्छ कि विवाहित महिलाले सेतो साडी कहिले पनि लगाउनु हुँदैन, किनकि महिलालाई सेतो साडी लगाउनु अशुभ मानिन्छ। यससँगै यो साडी विधवा महिलाको प्रतीक मानिन्छ किनकि जब एक महिलाको लोग्ने मर्दछन्, उनलाई सेतो साडी लगाउनु पर्छ। यस कारणले गर्दा विवाहित महिलाले सेतो साडी लगाउनु हुँदैन।
आजको समयमा, महिलाले सुनको पाउजु र बिछियाँ लगाइरहेकी छन्, तर खुट्टामा सुनले बनेको कुनै चीज कहिले पनि लगाउँदैनन् । किनभने सुन कुबेर देवताको प्रतीक मानिन्छ र यदि तपाईले सुनको पाउजु वा नेटल लगाउनु हुन्छ भने तपाईसँग कुबेर देवता रिसाउनुहुन्छ भन्ने मान्यता छ।
Prevविवाहित महिलाले भूलेर पनि नलगाउनुहोस् यी चीज, मानिन्छ निकै अशुभ
Nextभारतीय सेनाले गोर्खाली भर्तीमा नेपालीलाई रोक लगायो
फेरि कडाइका साथ लागू हुने भयो स्मार्ट लकडाउन , के गर्न पाईन्छ ? के गर्न पाईदैन? जान्नुहोस
निषेधाज्ञामा पुनः कडाइ, पसलहरु हप्तामा तीन दिन, सवारी साधनमा जोरबिजोर
रेखा थापालाई गालीगलौज गर्ने शर्मिला वाइबा प्रकाउ